Semalt:4भिडियो फाईलहरूबाट छविहरू निकाल्ने विभिन्न तरिकाहरू
के तपाइँ एक भिडियो फाइलबाट छवि लिनु चाहानुहुन्छ? प्राय: टेलिभिजन कार्यक्रम र चलचित्रहरू प्रति सेकेन्ड २ 23- images० छविहरूमा चित्रित हुन्छन्, र प्रत्येक व्यक्तिगत चित्रलाई फ्रेम भनिन्छ। त्यसो भए त्यस अवधिमा फ्रेम फ्रेम प्रति सेकेन्ड (FPS) आयो। तपाईं एक विशेष क्षण क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ तर बदसूरत वा अप्ठ्यारो फ्रेमको साथ अन्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई केवल एक विश्वसनीय कार्यक्रम वा सेवा चाहिन्छ जसले गुणवत्तामा सम्झौता नगरी भिडियो फाइलबाट छविहरू निकाल्न सक्दछ।
१. नि: शुल्क भिडियो जेपीजी कन्भर्टरमा
अन्य DvdVideoSoft उत्पादनहरु जस्तै, जेपीजी कन्भर्टर गर्न नि: शुल्क भिडियो यसको उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस को लागी परिचित छ। यो प्रोग्राम ओपनकेंडी एडवेयरको साथ बन्डल गरिएको छ र सजिलै भिडियो फाइलबाट छविहरू निकाल्दछ। तपाईं छविहरू तपाईंको हार्ड ड्राइभमा JPG वा PNG ढाँचामा सिधा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले भर्खर भिडियो फाईलको संख्या थप्न यसको फाइल फाईल बटन प्रयोग गरेर वा ड्र्याग एण्ड ड्रप प्रयोग गर्नुपर्छ। यस उपकरणले WMV, VOB, MKV, MP4, AVI, र FLV जस्ता सबै भिडियो ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ। भिडियो फाइलबाट बहु छविहरू निकाल्न केहि मिनेटहरू मात्र लाग्छ। जेपीजी कन्भर्टरमा नि: शुल्क भिडियोले आफ्नो हार्ड ड्राइभमा छविहरू तिनीहरूका मूल र colorsहरूमा डाउनलोड गर्दछ।
२. VLC मीडिया प्लेयर
VLC एक खुला स्रोत मिडिया प्लेयर हो कि भिडियो फाइलबाट तस्विरहरूको अनुक्रम निकाल्न र बचत गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो सब भन्दा राम्रो यसको उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस को लागी परिचित छ र अन्तरक्रियात्मक विकल्प र सुविधाहरु को एक ठूलो संख्या छ। एकचोटि डाउनलोड र स्थापना भएपछि, VLC मिडिया प्लेयरले विशिष्ट YouTube वा डेली मोशन भिडियोबाट आरामसँग तस्बिरहरू निकाल्ने छ र छविहरूलाई तपाईंको हार्ड ड्राइभमा द्रुत रूपमा डाउनलोड गर्दछ। यदि तपाईं भिडियोको फ्रेम दरको बारेमा विश्वास गर्नुहुन्न भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं Ctrl + J थिच्नुहोस् र फ्रेम दर नम्बर खोज्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं सीधा आफ्नो भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, र चित्रहरू स्वचालित रूपमा स्क्र्याप शुरू हुनेछ।
VirtualDub इन्टरनेट मा एक उत्तम र सबै भन्दा विश्वसनीय भिडियो प्रसंस्करण उपकरण हो। यो धेरै समय को लागी गरीएको छ र विशेष भिडियो फाईलबाट छविहरू निकाल्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस उपकरणको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरू मध्ये एक यो MP4, MOV, र MKV जस्तै फाइल समर्थन गर्दछ। एकचोटि डाउनलोड र सक्रिय भएपछि, तपाईं यो उपकरण एक भिडियोबाट तपाईं चाहानु भए जति छविहरू निकाल्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो> फ्रेम विकल्पमा जानुहोस् र डिसेमेट विकल्प चयन गर्नुहोस्। यहाँ, तपाईंले आफ्नो छविको संख्या प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र तपाईंको हार्ड ड्राइभमा आरामसँग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। यो दुबै विज्ञ र नयाँ आगमनको लागि उपयुक्त छ।
FFMpeg को साथ, तपाईं सजिलै भिडियो फाइलहरू प्ले गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूबाट अन्तर्क्रियात्मक छविहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण पेशेवरहरू र गैर-पेशेवरहरूको लागि उपयुक्त छ र सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गरिनु पर्छ। FFmpeg सयौंदेखि हजारौं आदेशहरू समर्थन गर्दछ, र तपाईंले FFmpeg कसरी राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न यसको कागजात पढ्नुपर्नेछ। यो एक निःशुल्क, सुविधा संपन्न र लाइटवेट प्रोग्राम हो। छविहरू निकाल्ने बाहेक, FFMpeg ले कुनै प्रकारको भिडियो वा अडियो प्ले गर्न सक्छ।